Nagarik News - घरसँग बार जोड्ने कहिले?
शुक्रबार २० बैशाख, २०७०
चर्चित हास्यअभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले घर जोडेकी छिन्। 'नेपालमा कलाकारितामा लागेर केही छैन' भन्नेका लागि मेहनतको फल पाइन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो। लामो समय भाडाको घरमा बिताएकी उनी शुक्रवारदेखि आफ्नै पसिनाले आर्जेको नयाँ घरमा सरिन्। एक करोड १० लाख रुपैयाँको घरमा दीपाश्रीको बसाइ सन्तोषजनक नै होला।
तर, उनका शुभचिन्तकलाई सन्तोष छैन किनभने नेपालीको विवाह गर्ने औसत उमेर घर्काएकी उनलाई उनका शुभचिन्तकले घरमात्रै होइन, घरसँग 'बार' जोडेको हेर्न चाहन्छन्। उनी पनि भन्छिन्, 'मैले उल्टो गरेँ, पहिले घर जोडेँ।' त्यसोभए 'घर'सँग बार कहिले जोड्ने? धेरैले अचेल यस्तै प्रश्न गर्छन्। अनुत्तरित छिन्, उनी। ठट्टा गर्न माहिर दीपा ठट्टैमा भन्छिन्, 'उमेर भा' छैन, सुतेको जोडि्दनँ। जागा रहेको १६ वर्ष त भयो होला।'
पोखरामा 'लभ एन्ड लस्ट'
काठमाडौँको सुन्धारामा मुख्य आउटलेट रहेको 'लभ एन्ड लस्ट'ले पोखराको लेकसाइडमा पनि नयाँ आउटलेट खोलेको छ। 'लभ एन्ड लस्ट' सेक्स टोय बिक्री गर्ने नेपाली कम्पनी हो। विश्वबजारमा पाइने विभिन्न भेराइटीका कृत्रिम...
साहित्यकार बन्ने हो भने
‘स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते।' अर्थात् राजनीतिकर्मी अथवा राजा आफ्नो देशमा मात्रै पूज्य हुन सक्छ भने विद्वान् सबैतिर पूज्य हुन्छ। साहित्यकार विद्वान्को पनि विद्वान् हो। हितले सहित हुँदा ‘सहित'...
पोखरेली फोटोग्राफर विशरत्न शाक्यको फोटो स्टुडियोमा एकताका विभिन्न साइजमा फोटो राखेका हुन्थे। ग्राहकलाई कस्तो तस्बिर खिच्ने भनेर सोध्न 'स्याम्पल' राखिएका ती फोटोको खूब चर्चा हुन्थ्यो। फोटोको चर्चा हुनुको मुख्य कारण...
थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरेका डीबी गुरुङ छोरी सोविनलाई पनि यही क्षेत्रमा क्रियाशील गराउन चाहन्थे। चौध वर्षकै उमेरमा सोविनले त्यो लक्षण देखाइन्। 'म्ही छ्याबा’ फिल्ममा अभिनय गरेपछि सोविन फिल्ममा रमाउन थालिन्।
९० साल भुलाउने ७२ साल
महाविपत्तिको कुरा चल्नासाथ ९० सालको महाभूकम्पको प्रसंग उठिहाल्थ्यो। विपद्को नेपाली इतिहास भुलाउने गरी शनिवार महाभैँचालो गयो। हजारौँको ज्यान गएको छ, हजारौँ घाइते भएका छन्, लाखौँ घरबारविहीन भएका छन्। देशका महŒवपूर्ण...
दर्शक बोलाउँदै कलाकार
फिल्मको प्रवर्द्धन गर्न निर्माताहरूले नयाँ–नयाँ शैली थालेका बेला फिल्म 'जिन्दगी रक्स'का कलाकारले पूर्वका कलेज र फिल्म हलमा पुगेर दर्शक बोलाउने अभियान चलाएका छन्।
कथा होइन, बिलौना लेख्ने धेरै छन् : महेशविक्रम शाह
कथाकार महेशविक्रम शाह आजकाल उपन्यास लेख्ने योजनामा छन्। 'छापामारको छोरो' कथासंग्रहका लागि मदन पुरस्कार पाएका शाहका आधा दर्जनभन्दा बढी किताब प्रकाशित छन्। पेशाले प्रहरी उनी युद्ध–कथा लेखनमा माहिर मानिन्छन्। नेपाली...
केही समयअघि रुपन्देही, रुद्रपुरका दिलबहादुर इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल पुगे। 'उसकै लागि भनेर ज्यान हत्केलामा राखेर अर्काको देशमा पसिना बगाएको थिएँ,' दिलबहादुरको भनाइ उद्धृत गर्दै इप्रका बुटवल, महिला सेलकी प्रहरी...